Feryo tareenka ka shaqeeya Bosphorus way soo laabanayaan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDoomaha Tareenka ka shaqeeya ee Bosphorus ayaa soo laabanaya
22 / 01 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
xubno tababaro ah oo shaqada ku soo noqonaya ilaa sanadka ayaa soo noqonaya
'Doomaha tareenka', oo loo adeegsaday gaadiid xamuul sannado badan oo aan shaqeyneyn tan iyo 2013, ayaa dib loo isticmaali doonaa. Xawaaladi uhoreeyay ayaa la dayactiray waxayna shaqeyn doontaa sanadka 2020.
Sidee ayay wadihii tareenadu uga gudbeen Sirkeci una sii gudbiyeen Haydarpaşa wakhtiyadii hore? Weligaa taas ma ka fikirtay? Mise aragtay sida ay wax u socdaan? Markabkan, oo la furay sanadkii 2014-kii, wadiiqadihii tareenka ayaa lagu qaadi jiray doomaha udhaxeeya labada qaaradood ilaa tareenka tareenka udhaxeeya Yurub iyo qaarada Anatolia.
Wargeyska WargeyskaSida uu sheegayo warka Bengisu Kukul; Markiiba, gaadiid xamuul oo xamuul ah ayaa loo qaaday Haydarpaşa Station oo laga keenay Xarunta Sirkeci. Waxaa jiray halxirayaal tareenka loogu talagalay arrintan. Maraakiibta, oo kuwa tareennada loo yaqaan '' doonnida tareenka ', waxay sanado ka dhex shaqeynayeen Sirkeci iyo Haydarpaşa.
Tareenka ku fidsan xeebta dekedaha ku teedsan Sirkeci iyo Haydarpaşa waxay ku biiri doonaan biraha tareenka. Marka la raaco wadooyinka isku xidha baska iyo doomaha maraakiibta, ayaa wadihii gaariga loo rogi lahaa tareenka. Markay maraakiibta degay doonida tareenka ay yimaadeen xeebta ka soo horjeedda, waxay ku biiri doonaan biraha oo waxay sii wadaan safarkooda.
VAGONS LAGU SAMEEYAA LABA SIDAMADA ISTANBUL SINCE 1926
Marka, muxuu ahaa muhiimada ay leedahay harooyinkaas? Taariikhda harooyinkaas, kuwaas oo lagama maarmaanka u ah sii wadida gaadiidka tareenka ee u dhexeeya laba qaaradood, dhab ahaantii waxay ku beegan tahay tii hore. Adeeggii ugu horreeyay ee doonta doomaha u dhaxaysa labada dhinac ee Istanbul wuxuu dhacay Oktoobar 5, 1926. Sawirada hore, waxaa lagu arkaa in gaariga badda ku socda ee tareenka horyaala Haydarpaşa uusan aheyn tareen, laakiin uu yahay bad-weyn. Kadib markii gaadiidleyda iyo doomaha safarka ah ay wataan doomaha xariirka ganacsi ee sii kordhaya, waxaa la go’aamiyay in la dhiso maraakiibta tareenka iyo Haydarpaşa iyo jaangooyada Sirkeci ee gaadiidleyda wadooyinka tareenka ee Bosphorus.
TABABBARKA KOOWAAD EE KOORSADA: RAILWAY!
Doontii ugu horeysay ee tareen casri ah oo ku taal Istanbul ayaa waxaa laga dhisay Haliç Shipyard sanadki 1958 waxaana loogu magac daray Railway. Kadib, qaab dhismeedka baahiyaha sii kordhaya, Railway 1966 waxaa laga dhisay Haliç Shipyard 2. Iyo 1982, markabkii 3aad ee tareenka ee laga raaco Haliç Shipyard waxaa lagu dhisay magaca 'Railway 3' waxaana la galay adeegga. Seddexdan markab ee tareenka wata waxay wateen gaari udhaxeeya Sirkeci Haydarpaşa sanado badan. Kadib, markii la xirayo saldhigyada tareenka ee labada xeeba, adeegyada tareenka ayaa sidoo kale joogsaday, iyo dekedaha tareenka ee la xiray waa shaqeyn jireen.
Sidee bay u shaqeeyaan maraakiibta tareenka iyo marinnada ay maanta ku nool yihiin?
Istanbul waa magaalo isbeddela maalin walba, waxaanan goob joog u nahay taariikhdii ku dhacday indhahayaga hortooda. Doontii ugu horreysay ee tareenka, Railway Ferry, waa la joojiyey oo la iibiyey 2000 kadib. Tareenka 2 iyo 3 doomaha tareenka, oo aan inbadan la isticmaalin, waxaa laga helaa Dekada Haydarpaşa. Dekadda meesha uu tareenka ku soo dhowaado Sirkeci waa shaqo la'aan maanta, looma adeegsan doono. Dekadaha magaalada Haydarpaşa waa isku mid. Qardhooyinka waxay kuusoo bandhigayaan aragti qaas ah oo kahadalkooda bada ilaa bada
Ugu horreyntii, waxaan aadaa matxafka TCDD gudaha gudaha xarunta tareenka Sirkeci si aan u helo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan doomaha tareenka. Markii ay u sheegeen shaqaalaha ka shaqeeya madxafka in aan doonayo in aan helo macluumaad ku saabsan haamaha tareenka, waxa ay igu hagayaan agaasimaha maareeyaha dekada ee Haydarpaşa.
Waxyaabaha ayaa xoogaa dhib yaraada marka aad aado Haydarpaşa Port. Aad bay u adag tahay in la soo galo dekada, halkaas oo amniga adag laga qaato. Waxaa mahad leh kuwa iga soo kaxeeyey Sirkeci, waxaan gali karaa dekada. Marka hore waxaan la kulmayaa maareeyaha dekedaha, İrfan Sarı. Wuxu yidhi, Tareenada tareenka hadda dib looma istcimaalo oo kabtanka DOK, oo isagu aqoon intaas ka badan leh, ayaa igu hagaya madaxa adeega R servicetü Özkan.
Dib-u-habeynta Xoriyada tababarka
Rüştü Kaptan, oo 43 jir ah, oo muddo 63 sano ah ka shaqeynayay dekeda Haydarpaşa, wuxuu na siinayaa macluumaadka soo socda ee ku saabsan maraakiibta: “Mid kamid ah tareennada tareenka ayaa xirnaa tan iyo 1966 kan kalena wuxuu ahaa tan iyo 1982. Jidadka tareenka ee Sirkeci iyo Haydarpaşa kama shaqeynin illaa 2013. Go'aanka cusub, wuxuu diyaar u ahaan doonaa hawlgal ilaa Maarso 2020 oo mar labaad ayuu shaqeyn doonaa. Bishii Janaayo 2020, tareennada tareenka ayaa loo qaaday Tuzla Shipyard si dib-u-habeyn loogu sameeyo.
'MARMARAY TUBE WAA KU SAABSAN XAALADA'
Mar aan wax ka waydiiyey muhiimada ay leedahay taayirrada tareenada, wuxuu dhahay waa muhiim maxaa yeelay ma jiro meel kale, wuxuuna sii wataa: “Gawaarida xamuulka ee xamuulka ah way adagtahay in ay maraan marinka dhulka hoostiisa mara ee loo isticmaalo Marmaray maxaa yeelay marinka Marmaray waxaa loo dhisay gaadiid rakaab ah. Waxa jira gaadhi xamuul oo culayskoodu yahay 10 tan ilaa 90 tan. Ka sokow, Suuragal ma aha in alaabaha halista ah iyo rasaasta milateri ay ka dhex baxaan tuubbada. Gawaarida tareenka ayaa ku haboon gaadiidk maadaama ay wataan 12 gaadhi iyo 480 tan oo qaadaya awood. Wuxuu shaqeeyay 24 saacadood maalintii markii uu adeegayay wuxuuna sameeyay 8-9 jeer maalintii. Cufnaanta ay ku kala duwan tahay dhoofinta iyo soo dejinta. Culayska sareeya ee ka imanaya Yurub ilaa Iiraan, tirada tareennada tareenka ayaa kor u kacay illaa saddex jeer. Just dhaqaaqin xamuul in Iran ma Ciraaq, sida ay Turkey, maxaa yeelay, labada tareenada. Kadib mashruuca Marmaray, markab udhaxeeya Tekirdağ iyo Derince, oo dhererkiisu yahay 187 mitir, oo leh 50 gaari ayaa bilaabay inuu adeego. Sidaa darteed, xamuulka xamuulka ah ee u dhexeeya labada qaaradood lama kala goyn. ”Wuxuu sheegayaa in tareenka xamuulka ah uu u dhexeeyo Van iyo Tatvan maanta. Si loo soo nooleeyo ganacsiga caalamiga ah loona ilaaliyo sooyaalka taariikheed, meheradaha iyo doomaha tareenka waa in la cusbooneysiiyaa oo mar labaad la adeego.
Ogeysiiska Qandaraaska: Qandaraaska iibka unugyada 22 ee tareenada
Qandaraaska Qaybta 22 ee TCDD Train Ferries
Ogaysiis Qandaraasle ah: Shidaalka Mashiinka Diesel Motor waxaa Laga Yaabaa In Lagu Tababaro Tareenada
Ogeysiis Qandaraasle ah: Qalabka waxaa laga iibsan doonaa Train Ferisi
Istanbul Bosphorus Road Tunnel si loo aamino gaadiidka Istanbul
Haydarpaşa Sirkeci Trains Ferries